भारतले नेपाललाई किन सधैँ हेप्छ ?
नेपालमा राजनीतिगर्नेहरूले देशको सार्वभौमिकता बिर्सेर, आत्मनिर्णयलाई लातहान्दै कुर्सीका लागिउतै पसारिने चलनजो छ। आफू कमजोर भएर न अरूले हेप्ने हो !
भारत आफैँमा शक्तिशाली राष्ट्रहो। त्यसैले आफूभन्दा साना मुलुकलाई हेप्ने गर्छ। ती साना मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ। नेपालसँगको खुला सिमानाका कारण पनि भारतले जहिल्यै हेपिरहन्छ। चीनभन्दाभारतको नाका सहज छ। अर्को कुरा कुनै पनि राजनीतिक निर्णय लिँदा नेताहरू भारतमुखीभएकाले उसले हेप्ने गर्छ।
भारतले नेपाललाई मात्र हेपेको छ र ? भाषा, धर्म र भूगोललगायत विभिन्न निहुँमा उसले पाकिस्तान,बंगलादेश, भुटान आदिलाई पनि हेपिराख्छ। चीनलाई त हेप्न खोज्छ। सार्क राष्ट्रहरूको हिरो बनेको छ। हिरोले अरूलाई हेपिहाल्छ नि।
भारतले नेपाललाई आफ्नो भाइ ठान्छ। भाइ सोचेर लाउनखान सबै आफैँले दिएपछि हेप्दैन त ? एकातिर दाजुभाइको सम्बन्धभनेर ठिक्कपार्छ, अर्कातिर लेनदेन पनिगरिरहन्छ। हामीमागेको मात्र देख्छौँ, आफूबाट लिएको देख्दैनौँ। ठूलो मन भएको हाम्रो नेपालीप्रवृत्तिले नै हेप्ने बाटो खुलेको हो।
भारत नेपालभन्दा शक्तिशाली छ। ठूलो पनिछ।शक्तिशालीले आफूभन्दाकमजोरमाथि सजिलै वर्चस्व कायम गर्छन्। भारतसामु नेपाल सानो र कमजोर छ। त्यसेले भारतले नेपाललाई हेप्छ।
नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम देश भनिएको छ।तर, भारतले नेपाललाई विभिन्नबहानामाबारम्बार हेपिरहेको हुन्छ। सीमानाकामा थिचोमिचो गर्छ। कहिले नाकाबन्दी गरिदिन्छ, कहिले नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्छ। भारतले यो सबै गर्नुको कारण चाहिँ शासकहरूसँग भएका चोर सम्झौता हुन्। जसले गर्दा उसले नेपाललाई बारम्बार हेपिरहन्छ !
राणाप्रधानमन्त्रीजंगबहादुर राणादेखिहालसम्मका नेपालका शासक जो ब्रिटिस भारत र स्वतन्त्रभारतसामु नतमस्तक भए, उनीहरूका कारण भारतले नेपाल र नेपालीलाई हेप्दै आएको छ। भारतीय शासकको आशीर्वाद र सहयोगले नेपालकाशासक कुर्सीसम्म पुग्छन्। यताको शासक बनेपछिउताको शासकको चाकरी गर्न थाल्छन्। त्यसैले भारतले हेप्छ।
हाम्रा नेता सत्तामा पुगेपछि भारतका शासकको चाकरी गर्न थाल्छन्। उताका शासकको आशीर्वादले आफू सत्तामा टिकिरहने आशा राख्छन्। भारतले नेपाली नेतालाई विभिन्नलोभ र प्रलोभन देखाउँछ। हाम्रा शासक आफू हेपिएको थाहा नपाएझैँ गर्छन्। त्यसैले भारतले हेप्छ।
हामीले आफ्नो इतिहासबाटनसिकेको पाठको नतिजा हो यो। इतिहासबाट केही नसिक्ने नेपालीलाई भारतले हेपेर सजायदिएको हो।
नेपालीले आफ्नो फुर्किने बानीले हेपाइ पाएको हो। ‘नेपाली बहादुर हुन्छन्’, ‘हामीसँग सगरमाथाछ’, ‘हामीबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध छ’भनेर खुशी हुन्छौँ। त्यसैले आफू हेपिएको चालै पाउँदैनौँ।
नेपालसँग प्राकृतिक स्रोत भव्य छ। त्यसैले भारत नेपालका नेताहरूलाई आफ्नो गोजीमा राख्न चाहन्छ। आफ्नो प्रभुत्वजमाउनखोज्छ। नेपाल पनि भारतकै हिस्सा होस् भन्ने चाहन्छ। बिहान उठेदेखि राति सुत्दासम्मनेपालीले भारतकै उत्पादनउपभोग गर्नुपर्छ, उसकै भर पर्नुपर्छ। यति भएपछि उसले हामीलाई हेपिरहन्छ।
शक्तिशालीले कमजोरलाई सधैँ हेप्छ। भारतले हामीलाईतबसम्म हेपिरहन्छ,जबसम्महामी आत्मनिर्भर हँुदैनौँ।
नेपाल आफ्ना हरेक कुरामा भारतसँगसुझाव र सहयोग लिन्छ। स्वावलम्बी नभएपछि भारतले नेपाललाई नहेपे कसलाई हेप्छ?एकातिर हामी भारतले हेप्यो भनेर कराउँछौँ, अर्कातिर हाम्राशासक ‘म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर्नू’ भन्ने खालकाछन्। त्यसैले भारत ढुक्क छ, नेपालले केही गर्नेवाला छैन अनिहेप्न थाल्छ।
भारतले हेप्नुको मुख्य कारण ऊमाथि हामी निर्भर हुनु हो। जब कोही मान्छे अरूको शरणमाजान्छ, तब पक्का हेपिइन्छ। ‘भारतीयशासकलाई रुष्ट बनाइयो भने हाम्रो पद गुम्छ’ भन्ने नेपाली नेताको सोचका कारण पनि भारतले हेपेको हो।
बलियोको स्वभाव हुन्छ– कमजोरलाई दबाउने र हेप्ने। भारत आफैँमा हेपाहास्वभाव भएको देश हो। उसले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँछ। हाम्रा नेता बोल्न सक्दैनन्। जनता सामाजिक सञ्जालमा देशभक्ति देखाउँछौँ। त्यसैले हेपिन्छौँ।